China Mkpa nnu na ose ose ihe nrụpụta na ndị na -eweta ya Trimill
Ndụ dị ndụ, iri ihe na ị drinkingụ mmanya bụ okwu abụọ, na -eleba anya n'akụkọ mmepe mmadụ, na -enweghị nri, mmadụ agaghị adị ndụ ma mụọ nwa. Yabụ, nri anyị na -ejighị kpọrọ ihe bụ n'ezie "nnukwu"! Sitekwa na ndị mgbe ochie na-a bloodụ ọbara ruo n'ịchọpụta ọkụ iji sị nri ọma gaa nke ọma, ụmụ mmadụ ji nwayọọ nwayọọ na-eji amamihe nke "iri nri" emeju afọ ojuju nke ndị na-eribiga nri ókè, ọtụtụ ụzọ esi esi nri apụtala, na imepụta ngwa ọrụ dị iche iche nwekwara. pụta. Igwe ọkụ ọkụ bụ otu n'ime ha.
Nkọwapụta, igwu ihe bụ ọrụ otu na -agbanwe ihe siri ike ka ọ bụrụ obere irighiri ihe. Na China, ọ bụghị naanị na a na -egwe ọka maka mkpụrụ ọka kamakwa ejiri ya mee ihe maka ọgwụ, mana itinye nri ka dị ntakịrị "umengwụ." Ọ bụ-ose.
N'ezie, ọ bụghị naanị na ọnụ ahịa dị oke ọnụ, ose n'onwe ya na -emebikwa nke ukwuu. A ga -efufu ísì ya site n'ịgbanwe ihe ndị dị na kemịkalụ, yabụ idobe akara na -enyere aka ịchekwa isi nke ose ruo ogologo oge. N'otu oge ahụ, ose ga -efufu ụfọdụ ísì ya n'okpuru ọkụ ọkụ. Mgbe agwachara ya ka ọ bụrụ ntụ ntụ, okpukpo nke ose ga -amalite ngwa ngwa, ọkachasị okpomọkụ nke igwe na -egwe ihe ga -eme ka usoro mkpali na -esiwanye ike pụta. Ọ bụ sọsọ ala nwere ike hụ na isi ose na -esi ísì agaghị apụ apụ ma ọ bụ hapụ. Mgbe ị na -esi nri, ijide onye na -egwe ose ka ọ gwerie ma gwerie mkpụrụ osisi ose ma fesaa ya n'elu nri bụ ụzọ dị mma iji bulie isi nke ose ojii.
Enwere igwe igwe nri abụọ n'ime ụlọ iri nri na ime nri: otu maka nnu na otu maka ose, nke dị mma maka nri ndị China na nke ọdịda anyanwụ. grinder ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka nnu na ose grinder.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ igwe anaghị agba nchara ka a na -etinye ihe ka ọtụtụ ose na -egwe ose n'ahịa, nke nwere ike imebi n'oge nnu nnu. Iji zere ọnọdụ a, anyị ahọrọla seramiiki na-egwe ihe, nke na-adịghị egbu egbu, na-adịghị emetọ emetọ, na-abụghị oxidizing na anaghị emebi emebi. Isi ike na-eguzogide ike dị elu bụ nke abụọ naanị na diamond, na ihe pụrụ iche na-abụghị ọla anaghị emepụta pores ma na-egbochi uto nke nje bacteria; conductivity thermal ya dị ala nke ukwuu karịa nchara, yana ọkụ ya pere mpe iji jigide isi ahụ; agba ahụ na -acha ọcha ma gbaa gburugburu, nwere udiri jed, na -agbakwunye ọmarịcha obi ụtọ.
Nke gara aga: Manual Spice Salt Pepper Mill nwere oge dị iche iche
Osote: Ọhụrụ nkwalite Portable Electric kọfị grinder
Igwe ihe ncha ose
Onye na -asacha ose
Nnu na ose ose grinder Nịm
Nnu na Ose ihe igwe ihe na -edozi ọkụ eletrik
Manual ose Nnu Nnu ose na iche iche Se ...